Fahafatesana sy Twitter: Tati-Baovao Avy any Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2014 16:30 GMT
Tamin'ny 11 Mey 2014, andro nanatontosan'ny nitono-tena ho Repoblika Nasionalin'i Donetsk referendum [tatitra Global Voices Malagasy] nanapahany hevitra momba ny satany manoloana an'i Okraina (referendum izay efa fantatra fa tsy hoeken'ny governemanta Okrainiana), nitatitra tao amin'ny Twiter ny Rosiana mpanoratra gazety Ilya Azar fa nitifitifitra fahatany ireo sivily tao Krasnoarmeysk sendra nandalo azy ireo ny Mpiambina Nasionaly vao natsangana. Ahitana sary mampihoron-koditra maro ny sioka ho an'izay mbola mahasahy mijery.
Maha-ankona daholo ny siokan'i Azar, satria sioka avy amin'ny lehilahy iray mpankasitraka ny tolon'i Maidan ary mpanoratra an-gazety izay nahatonga ny fandravana ny ekipam-panoratan'ny Lenta.ru [tatitra Global Voices] ny angom-baovao nataony momba an'i Okraina. Io Azar io koa dia tsy manana fitiavana ireo mpisintaka ao Donetsk — nahatonga azy ho ratsy toerana ihany koa [tatitra Global Voices Malagasy] ny hasiakan'ny nosoratany rehefa nizara ny sariny sy niantso azy ho “provocateur” [mpiantsy] “hokarakaraina” ny milisy any an-toerana.
Angamba ireo fitambaran-javatra voatantara ireo no nahatonga ny siokany ho niely sy nalaza haingana vetivety ka ahazoany asidra avy amin'ny andaniny sy ny ankilany, izay nahatonga azy hisioka fa “tsy hamaky intsony ny setrin-“-‘ny siokany. Namaly tamin'izay antsoiny hoe [ru] “fanoratan-gazety miavaka” ny namana mpanoratra an-gazety Oleg Kashin. Sioka vitsivitsy monja [ru] no ataon'i Azar dia efa “nampirehitra ny fomba fihevitry ny olona tao amin'ny firenena roa”. Izany, hoy i [ru] Kashin, no olana amin'ny media maoderina: “mamoaka lahatsoratra avy eo manao ny fombafomba foana sy tsy misy ilàna azy mba hahazoan-karama fotsiny.” Ao anatin'ity tontolo fohy loatra hifantohana amin'ny elanelam-panahy ity, dia mety angamba ny ataon'i Kashin.